Wepụta ndekọ ntanetị maka WordPress na GravityView | Martech Zone
Mee akwukwo ntanetị maka WordPress na GravityView
Saturday, October 24, 2020 Saturday, October 24, 2020 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị bụ akụkụ nke obodo anyị ruo oge ụfọdụ, ị mara oke ịhụnanya anyị nwere Dị mpi ike maka ụdị mpempe akwụkwọ na nchịkọta data na WordPress. Ọ bụ naanị ihe na-egbuke egbuke. Emechara m ngwa ngwa ndọda Forms na Hubspot maka onye ahịa ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Isi ihe mere m ji ahọrọ ụdị gravity bụ na ọ na-echekwa data na mpaghara. All nke njikọta maka ndọda Forms ga-enyefe data na usoro nke atọ. Nke a bụ ihe dị mkpa maka ndị ahịa m… achọghị m data furu efu ma ọ bụrụ na API nke atọ gbadara ma ọ bụ nwee ụdị nkwado ọzọ. Imirikiti ụdị kọntaktị dị mfe na ahịa anaghị eme nke ahụ.
Na mgbakwunye, site na iji ngwaọrụ dịka ReCaptcha na Google Maps na-arụ ọrụ na igbe ahụ, ọ bụ naanị usoro siri ike. Azụrụ m akwụkwọ ikike saịtị na-akparaghị ókè ọtụtụ afọ gara aga ma na-eji ya eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwọta ọ bụla ị ga-eche n'echiche.
Etu esi gosipụta data gravity?
Dị ndọda bụ ngwá ọrụ dị mma maka ịchekwa data… mana ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie igosipụta data ahụ na saịtị gị? Enweela m ụfọdụ ndị na-eme ihe ntanetị n'ịntanetị maka ndị ahịa mere nke a, ọ bụghịkwa ọrụ dị mfe. M mepụtara a workflow ngwaahịa na-egosipụta data esịtidem ka admin… ọ bụ nnọọ na-arụ.
Ọfọn, ịnabata gị Ike ndọda! GravityView bụ ngwa mgbakwunye WordPress nke ị nwere ike iji bipụta data gravity Forms gị. Ọ dị egwu - ọ nwedịrị ngọzi nke Ọdịdị Gravity dị ka azịza kachasị mma.
Iwulite ndekọ ntanetị dị mfe! Mee mpempe akwụkwọ iji nweta ozi, wee wulite maapụ na ndepụta aha ndekọ nke gosipụtara data… na-edeghị otu akara koodu!
GravityView na-enye ikike iji wulite echiche na-akparaghị ókè, kwado ma jụ ntinye tupu ha adị ndụ, ma na-enyere ndezi nke ndenye ndị ahụ site na njedebe n'ihu. Gwakọta WordPress, Mpempe Akwụkwọ, na Nnweta Ọdụ, ị nweela usoro njikwa ọdịnaya zuru ezu nke nwere ike ịnakọta ma gosipụta data ọ bụla ịchọrọ.
Enwere ike ilele data dị ka ndepụta, tebụl, tebụl data, ma ọ bụ ọbụna na maapụ.
Kedu ka GravityView si arụ ọrụ?
Mepụta ụdị - Nke mbụ, mepụta ụdị na Vitydị ndọda, ụdị kachasị mma maka WordPress. Tinye ubi na mpempe akwụkwọ ma tinye ya na websaịtị gị.
Chịkọta data - Mgbe ahụ, dejupụta mpempe akwụkwọ. Gị data ga-echekwara na azụ ọgwụgwụ nke weebụsaịtị gị, n'ime ngwa mgbakwunye Gravity Forms.
Chepụta nhazi gị - Mepụta nhazi zuru oke gị site na iji ntaneti-na-dobe interface. Họrọ ubi ị ga-etinye na ebe ị ga-egosipụta ha. Enweghị koodu ịchọrọ!
Tinye ya na saịtị gị -
N'ikpeazụ, tinye ma gosipụta data gị na njedebe njedebe nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Nwere ike ịlele ma ọ bụ dezie ndenye na-enweghị na-aga site na WordPress menu.
Ọ dị mfe!
Ngọnarị: Ana m eji njikọ njikọ m maka ndọda Forms na Ike ndọda ke ibuotikọ emi.
Tags: Mgbakwunyenakọta datatebụl datagoogle mapụdị ndọdandọdaokpokorondekọ ntanetịmap WordPress
Iji WordPress na gravity Forms weghara-eduga
Ngwaọrụ Kachasị mma maka Woocommerce Email Marketing